Wasaaradda Isgaarsiinta oo ka hadashey sida looga gaashaaman karo Internet la’aanta • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Wasaaradda Isgaarsiinta oo ka hadashey sida looga gaashaaman karo Internet la’aanta
Wasaaradda Isgaarsiinta oo ka hadashey sida looga gaashaaman karo Internet la’aanta
Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta Xukuumadda Soomaaliya Eng. Cabdi Canshuur Xasan
Dadaal dheer oo ay si wadajir ah u bixiyeen Dawladda Soomaaliya iyo Shirkadda gaarka loo leeyahay ee hirgelisay adeegga Fiber Optic-ga ayaa waxaa lagu guuleystay in dib loo soo celiyo adeeggii internet-ka ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
In si degdeg ah loo ansixiyo Xeerka Isgaarsiinta Qaranka, kaasoo qeexaya mas’uuliyadaha dhinac kasta. Sharcigu wuxuu dadweynaha siinayaa awood ay magdhaw ku weydiisan karaan haddii shirkadaha ay ka soo bixi waayaan adeeggii ay heshiiska kula galeen.
Shirkaddaha Isgaarsiinta iyo adeegyadda Internet-ka waxaa laga doonayaa inay sameyaan qaab xarigga looga ilaalin karo maraakiibta ku soo xiraneysa Dekedda Muqdisho, taasoo u baahan inay isla qorsheeyaan hay’adaha kale ee dawladda ee ay arrintaas khuseyso.
Shirkadaha ka shaqeeya internet-ka waxaa la farayaa inay sameystaan khad kale oo keyd ah (backup) si haddii mid cillad ku timaado ay ugu badbaadaan khadka kale.
Waxaa ganacsatada lagu baraarujinayaa in ay dalka ka furantahay fursad ganacsi oo ay ku maal-gashan karaan xargo kale. Baahida internet ee sii kordheysa iyo kalsoonida lagu qababa waxay muujinayaan in loo baahan yahay xarko kale.
Wasaaradda waxa ay gacanta ku haysaa qorshe qaran oo ay qeyb ka noqon doonaan dhamaan daneeyayaasha isgaarsiinta dalka, kaas oo damaanad qaadi doona helitaanka isgaarsiin tayo leh, la isku halayn karo oo la awoodi karo, kuna baahsan dhammaan dalka oo dhan.
Wasiirada Isu sharaxay kursiga gudoomiyaha baarlamaanka oo shuruudo adag la hor dhigay.
Shirka tayaynta Hay’adaha Puntland Oo maalintii labaad galay -DHEGAYSO
April 22, 2018 By Mjama
Taliska ciidanka Soomaaliya oo magicii ka bedalay xeradii ciidanka Imaraadku tababareen -SAWIRO
April 21, 2018 By Mjama
Farmaajo oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomney Danjiraha Dowladda Qatar ee Soomaaliya
April 21, 2018 By HORSEED STAFF